ISITHOMBE: Odokotela baseMzansi baxhume ngempumelelo induku kowesilisa | News24
ISITHOMBE: Odokotela baseMzansi baxhume ngempumelelo induku kowesilisa
Cape Town – Ithimba lodokotela baseStellenbosch University (SU) kanye nesibhedlela iTygerberg Academic Hospital basanda kuqhuba ngempumelelo uhlelo lokuxhunywa kwenduku yowesilisa, nokwenze lesi sikhungo saba ngesokuqala emhlabeni wonke ukuthi sikwazi ukuqhuba lolu hlelo izikhawu ezimbili ngempumelelo.
Uhlelo lokuxhunywa noma ukufaka induku kowesilisa lwenzeka okokuqala ngqa ngenyanga kaDisemba kunyaka ka-2014 kuso lesi bhedlela esifanayo.
UProf André van der Merwe, oyiHead of the Division of Urology, emkhakheni we-Faculty of Medicine and Health Sciences (FMHS), e-SU, uyena obehola lolu hlelo olwathatha amahora angu-9 nohhafu ngomhlaka-21 ku-Ephreli.
Umuntu owahlomula ngowesilisa oneminyaka engu-40 ubudala owalahlekelwa yinduku yakhe eminyakeni engu-17 eyedlule ngemuva kwezingqinamba abhekana nazo kulandela ukusokwa ngokwesintu. Igama lalo wesilisa ligodliwe.
“Nakanjani ungezinye zeziguli ezijabule kakhulu ewadini. Wenza kahle kakhulu,” kusho uProf Van der Merwe.
“Azikho izimpawu zokungamukeli, futhi zonke izitho ezifakeliwe zibukeka ziphola kahle.”
Lesi siguli kulindeleke ukuthi siqale ukukwazi ukwenza imisebenzi ejwayelekile eyenziwa yisitho sangasese efana, nokuchama nokunye, esikhathini esiyizinyanga eziyisithupha ngemuva kwalolu hlelo.
Ukungafani kwemibala phakathi kwesitho sangasese sesiguli kanye nesitho anikelelwe ngaso kuzofihlwa nge-tattoo esikhathini esiyizinyanga ezingu-6 kuya kwezingu-8 kwenziwe uhlelo.
“Ngebhadi asikwazanga ukuthola onikelayo webala elifanayo. Kulesi simo onikelayo umhlophe kanti onikeleliwe mnyama.”
UNgqongqoshe wezeMpilo eWestern Cape, uDr Nomafrench Mbombo, uchaze lolu hlelo lokuxhunywa kwenduku njengempumelelo.
Kuthiwa induku yonke yowesilisa yakhishwa ngokukhulu ukucophelela kulo owayenikela ukuze kugcinwe imithambo yegazi isebenza ngendlela. Kwabe sekubekwa umaka yonke imithambo maqede kwaxhunywa induku kowesilisa owayenikelelwa.